OneLocal: Fitaovana fitaovam-barotra ho an'ny orinasa eo an-toerana | Martech Zone
OneLocal dia fitaovan'ny fitaovam-barotra natao ho an'ny orinasa eo an-toerana hahazoana fitsangatsanganana an-tsokosoko, fanondroana anarana ary - farany - hampitomboana ny vola miditra. Ny sehatra dia mifantoka amin'ny karazana orinasam-panompoam-paritra rehetra, mandany ny fiara, ny fahasalamana, ny fahasalamana, ny serivisy an-trano, ny fiantohana, ny trano, ny salon, ny spa, na ny indostrian'ny varotra. OneLocal dia manome efitrano iray hisarihana, hitazomana ary hampiroborobo ny orinasanao kely, miaraka amin'ny fitaovana ho an'ny faritra rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa.
Ny fitaovan'ny rahona OneLocal dia manampy anao hanome traikefa tsara indrindra ao an-dakilasy, mampifandray anao amin'ny mpanjifa amin'ny fomba misy dikany kokoa. Ny fitaovana tsirairay dia natao hiasa tsy miankina, fa rehefa mifandray kosa dia manolotra automatique feno izy ireo handroahana ny fitomboan'ny vola miditra ary hitsitsy fotoana. Tsy misy fotodrafitrasa na fotoana fanomanana ilaina, miditra fotsiny ary jereo ny asa OneLocal ho an'ny orinasanao.
Ny suite an'ny vokatra OneLocal dia misy:
ReviewEdge - manangona sy mampifantoka ny hevitr'ireo mpanjifanao ary manaova tsikera an-tserasera bebe kokoa.
ReferralMagic - manararaotra marketing am-bava, mampihena ny fandaniana amin'ny marketing ary mampitombo ny vola miditra.
ContactHub - CRM orinasa kely hanampiana anao hanangana, hitantana ary hanome vola ny olona ifandraisanao.
SmartRequest - sehatra ecommerce hahafahan'ny mpanjifa mividy mivantana amin'ny tranokalanao.
LoyaltyPerks - programa fahatokisana ny mpanjifa hanampy anao hitazona tsara kokoa ny mpanjifa ary handoa vola bebe kokoa amin'izy ireo.
Tags: fiarafakana hevitracontacthubCRMsehatra tsy fivadihan'ny mpanjifasehatra famerenana ny mpanjifaCustomer reviewsecommercefahasalamanaserivisy an-tranofiantohanaan-toeranamarketing eo an-toeranasehatra marketing eo an-toeranatsy fivadihanaonelocalfangatahana amin'ny Internetfangatahana serivisy an-tseraseravarotra sy hofa fananana mifakasehatra referralreferralmagicanaranaantsinjaranyfamerenanafampisehoanacrm orinasa kelySpaWellness
SEO: fironana 5 hanararaotana tsara ny fikarohana Organika Google